Warbixin “Abaarta ka jirta Gobollada haddii aan loo helin Gurmad degdeg ah waxaa laga yaabaa in meelaha qaar ay dad ku dhintaan”. | Dayniile.com
Home Warkii Warbixin “Abaarta ka jirta Gobollada haddii aan loo helin Gurmad degdeg ah...
Warbixin “Abaarta ka jirta Gobollada haddii aan loo helin Gurmad degdeg ah waxaa laga yaabaa in meelaha qaar ay dad ku dhintaan”.
Waxaa muuqata in xaaladda ka jirta dalka Soomaaliya in aysan sii socon karin marka laga fiiriyo dhinac walba oo wax tar u leh horumarka bulshadda. Waxaana cad in laga yaabo in ay keento in dowladnimaddu bur- burto. Meelaha ugu daran waxaa waaye amiga, siyaasadda, dhaqaalaha iyo deegaanka oo abaar xoog leh ay faro ku hayso dhamaam dalalka Geeska Afrika.
Dhanka abaarta gobolo badan ayaa waxaa ka jira biyo la’aan iyo basd la’aan… haddii aan gurmad degdeg ah la helin waxaa laga yaabaa in meelaha qaar ay dad ku dhintaan gaar ahaa goboladda Gedo, Jubadda Dhexe iyo Jubadda Hoose.
Dhanka dhaqaalaha, waxaa muuqata in sicir barar laga cabanayo xagga cunooyonka datuuriga ah iyo iyadoo waxyaabaha dibadda laga keeno oo ay ka mid yihiin qalabka dhismaha ay qaaliyoobayaan iyo iyadoo aysan dalka ka jirin waxa lacag ah iyo shaqo intaba. Howlihii oo dhan ee dalka waa istaagi rabaan kharsh la’aan.
Dhanka amniga, xaaladdu ma fiicna, waxaana cad in aysan jirin qaab dalkan amni loogu soo dabaali karo iyadoo aan qabaa’ilku si calool xaaran aysan u qaban dib u heshiisiin iyo nabad dhab ah.
Ciidamadda amaanku waxay u adeegi karaan shacab u heelan in ay nabadooda ka shaqeeyaan, taasina ma muuqato hadda. Goobo hore aysan colaadi uga jirin ayaa hadda hubka la isu guranayaa, cid isku dayesa in ay joojiso ama ka hortagto meesha kama muuqdaan ama maba joogto… Rabi yasir.
Dhanka siyaadadda oo ah boog weyn oo sii fashfasheysa, waxaxa waaye sida kaliya ee dhibaatooyinka kore lagu xalin karo ma, iyaba ma muuqato oo dad aan ehel u aheyn ayaa meel walba fadhiya… doorashooyinka dadban iyo gees marida qaanuunka iyo dastuurka waxaa laga yaabaa in ay uga sii daro dal ay ku gadaaman yihiin dhibaatooyinkaas oo dhan.
Masiibooyinka rabaaniga ah wax badan laga ma qaban karo oo abaarta sida ugu fiican waa in Ilaahay oo roob keena, laakiin waxaa la isku dayi karaa gurmad lagu bedbaadiyo dadka.
Laakiin waxaad ogaataa masiibadda uu bani’aadanku sameeyo waxaa kaliya oo lagu xaliyaa waa siyaasad hufan oo abaabulan oo leh wada-shaqeyn, isu turid iyo isgarabsi… Siyaasadda Soomaalida waa taa bugta oo ay adeegayaasha iyo garwadeenadda ka yihiin dad aan fahmi karin baaxadda dhibaatadda ka jirta dalka Soomaaliya guud ahaan…
Soomaaliya waxaa bedbaadin kara oo kaliya Ilaahay iyo dad wax gal ah… oo damiir leh oo is abaabula oo ka tirsan qeybaha kala duwan ee mujtamaca Soomaaliyeed ka kooban yahay.
Waxba wax baa ka daran, in loo gurmado goboladda abaartu ka jirto waaye mudnaanta koowaad. Inta kale waxay niqotaba! Waxaa la rabaa in cid walbana ay isxil qaanto oo ay garwaaqsato in dowladnimaddii mudaddda dheer la soo dhisayay sms la soo yabyabayay ee Soomaalia ay xaaladaas ku sugan tahay oo ay horteena ku burburiayso.
《Qof walba (mucaarad ito muxaafad) waxaa looga baahan yahay in doorkiisa maanta muujoyo haddii kale dalku wuu burburi…》
Ugu danbeyn, qof waliba waxaa waajib ah in uu ogaado in dad Soomaaliyeed oo walaalahaa ah in ay u dhimanayaan oon iyo gaajo, inta yar ee aad qaban karto hadda ayaa loo baahan yahay. Waxaa heli karo ku biiri samata bixintooda adigoo aan cid kale ku haleyn.
Mowqifkaasi waa waajib islaanimo iyo mid Soomaalinimo in dadka tabaaleysan la samatabixiyo oo la taageero. Xaaladda dadka iyo dalka ka taagan ma fiicna, waxa soo socdana Ilaah baa og, laakiin saadaashu ma fiicna! Dhamaad.
(Bartan haddii aad rabto in aad ka falceliso xor baa u tahay. Ogow in qoraalaagu uu meesha ku oolayo waligii…)
Fiiro Gaar ah
(Bartan ma aha meel aflagaado ama handadaad, haddii si mus’uuliyadi ku jirto aadan wax u qori karin, waxaa la qaatay in aadan wax qorin. Bartan muxaafad iyo mucaarad ma leh, waa bar ka dhaxeysa Somaali oo dhan oo lagu lafaguro wax dhab ah, iyada oon cidna wax loo dhimin.
Haddii aad dhibsatay wax halkan ku qoran, looguma talo galin in qof lagu dhibo. Laakiin waxaad ogaataa in arrimaha laga hadlayo ay yihiin mid saameyn ku leh masiirka shacabka Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan.
Ra’yiga saliimka waa xor, wax baana laga kororsan. Ogow, dowladdu waxay leedahay suxufiyiin, qareeno iyo mus’uuliyiin kale oo loo igmaday in ay dadka u sheegaan mowqifka siyaadadeed ee dowladda ama difaacaan.
Waxay sidoo kale leedahay wargeys, raadiye, television, bogag internetka iyo baro bulsho.)
Qore: Mohamed Mohamud Cadde.
Previous articleDowladda Sucuudiga oo dib u furaya safaaradii uu ku lahaa Soomaaliya
Next articleGHDD ee heer Federaal oo Puntland, Jubbaland & Hir-Shabeelle ka dalbaday soo gudbinta kuraasta la dooranayo.
Ra’iisul Wasaare Ku-xigeenka dalka oo xilalka u kala wareejiyay Wasiirada cusub ee Howlaha Guud iyo Xanaanada Xoolaha
Rakaab saarnaa duullimaad oo KLM ah oo laga helay nooca cusub ee fayraska Covid-19 iyo mas’uuliyiinta Holland
Golaha Midowga Musharaxiinta oo bayaan ka soo saaray waxay ku sheegeen in aysan aqbali doonin boobka ku socda doorashooyinka dalka
Madaxweyanahii hore Soomaaliya Farmaajo oo qas iyo fowdo Kabilaabay Doorshada Golaha Shacabku ee Dowald Gobolkeedka Hir-shabeelle
Xulafada Sauudiga uu horkacayo oo Sanca duqeymo ka geystay
Mudaharaadyada Iran ee biyo yarida ka dhshay oo sii xoogeystay
Xaalada Guriceel iyo Ahlusunna oo xalay lagu qanciyay inta aysan ka...
axmed shiikh - October 27, 2021 0
Wararka ka imaanaya caawa magaalada Guriceel ayaa sheegaya in caawa ay ka jirto Nabad Buuxda kadib Dagalo socday ku dhawaad 4 maalin iyo afar...
Daawo Wareysiga guddoomiyaha Ahlu sunna Sheekh Maxamuud Sheekh Xasan
Raiisul Wasaare Rooble iyo Wasiirka Amniga oo booqasho ku tagay Xarunta...
Dad Soomaaliyeed oo lagu dhaawacay Dalka Mareykanka
Puntland oo war kasoo saartay go’aankii ay ku dhawaaqday ICJ
Roobabkii Deyrta oo ka curtay Magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan.
Wararkii ugu dambeeyay xaaladda Guriceel
Wararkii ugu dambeeyey dagaal culus oo ka dhacay deegaanka Af-urur
AK-47 iyo M16 waa laba ka mid ah qoryaha ugu badan...
axmed shiikh - September 29, 2021 0